Himalaya Dainik » साझा पार्टीबाट अलग भए सूर्यराज र मुमाराम
डा. सूर्यराज आचार्य र मुमाराम खनाल साझा पार्टीबाट अलग भएका छन् । पार्टी निर्माण प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न नसकेपछि प्रवक्ता डा. आचार्य र केन्द्रीय सदस्य खनाल पार्टी संगठनबाट वि दा भएका हुन् । साझा पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आचार्य र खनाललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत पास गरेको छ ।
‘उहाँहरुले पार्टीको संरचना भ त्काएर संयोजक मात्र राखौं भन्नुभयो । अर्को प्रस्ताव एकीकरण, ध्रुवीकरण र पार्टी निर्माण भनेर जानुपर्छ भन्ने आयो र पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले एकीकरण, ध्रुवीकरण र पार्टी निर्माण भनेर जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ ।’
‘पार्टी कसरी बनाउने भन्नेमा नै हाम्रो फरक मत रह्यो’ साझाका एक नेताले भने, ‘उहाँहरुले पार्टीको संरचना भ त्काएर संयोजक मात्र राखौं भन्नुभयो । अर्को प्रस्ताव एकीकरण, ध्रुवीकरण र पार्टी निर्माण भनेर जानुपर्छ भन्ने आयो । र पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले एकीकरण, ध्रुवीकरण र पार्टी निर्माण भनेर जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ ।’
पार्टी एकीकरण–ध्रुवीकरणको बाटो रोज्नु भनेको उल्टो बाटो हुने आचार्य र खनालको तर्क छ । साथै दुबैले पार्टी संरचनामा नबस्ने बताएपछि आइतबार बसेको बैठकले अहिलेसम्म गरेको योगदानका लागि धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।
‘उहाँहरुले पार्टीको संरचनाबाट बहिर बसे पनि बैकल्पिक राजनीतिको मिसनभन्दा बाहिर हुन्नौं भन्नु भएको छ’ साझा पार्टीका एक नेताले बताएका छन् ।